Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy | Gasy ImpACT
Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy
Impiry isika no maheno firesaka : « Nisy an’izao HONO… » na « Izao indray HONO no malaza e… » na « Izao HONO no fandehan’io resaka io… » na « i Ranona anie HONO… « , ets. Feno HONO ny resaka rehetra. Inona no tena vaovao mari-pototra? Resaka noatavizina? Sa resaka tiana atao fotsiny?
Hiaraha-mahalala fa isika Malagasy dia havanana amin’ny fitiavan-dresaka. Isika rahateo manana Kolontsaina niaina sy nifampita ny tantara tamin’ny alalan’ny lovatsofina. Noho izany efa ao anatintsika mihitsy ity fahaizana miresaka sy mampita resaka ity.
Mazava loatra fa tsy ny lovatsofina no olana eto fa ny fitiavana manitatra sy fanapariahana vaovao tsy marina ary ny famoronan-javatra fotsiny tsotra izao. Mazava ihany koa fa tsy ny olona rehetra no mpamoron-tsaho, fa misy ny tena havanana amin’ity taranja ity.
Ny olana goavana matetika dia ny fitanterantsika sy fanapariahana feo na vaovao izay tsy hananantsika antoka ny fahamarinany. Te hiseho ho mahitahita vaovao tsy fahitan’ny hafa ve? Sa mba te handray anjara na hanafana resaka ka tsy maninona na milaza vaovao tsy marina aza?
Ny mampihomehy sady mampalahelo matetika dia ny mpitantara manitatra ary ny mpihaino koa tsy mamakafaka: tafahaona ny tia sy ny manina. Ny zava-doza dia tantara na vaovao tsy fata-pihaviana sy tsy fata-pototra no miparitaka ka heverina ho zava-misy ka voizin’ny besinimaro. Misy karazan’olona hafa indray miezaka mametraka sy mampiomana fa ilay “feo” izay henony dia tsy fantany ny fahamarinany fa kosa resahana ihany aloha sao dia…Matetika ireny resaka ireny dia miatomboka na miafara amin’ilay fiteny hoe: “Tsy haiko aloha izay fahamarinany an! Fa izany HONO!”
Mitovy ihany ny vokany aty amin’ny farany satria rehefa foy ny resaka ka miampita dia manana helatra hoy ny fitenenana. Ny mahavarina sy mahagaga indraindray dia na ny mpanao gazety sasany aza latsaka sy manamparitaka an’ireny “feo” ireny amin’ny haino aman-jery. Ny antenain-kanirina indray no mampivandravandra?
Tsy lavitra an-draTsaho ny Tondromolotra satria ilay “feo” niparitaka dia efa noraisina ho “zava-misy” sy “fahamarinana” ho an’izay rehetra tsy mandinika sy tsy mamakafaka ary atosiky ny hafanam-po ka mitarika tondromolotra eny amin’ny fiaraha-monina.
Ny Tsaho no bala ary ny Tondromolotra no basy…
Faheno matetika amin’ny vaovao ny resaka « armes de destruction massive » (fitaovam-piadiana mahery vaika), indrindra fa tany Irak. Eto amintsika dia misy ny fitaovana mahery vaika izay tsy hita maso kanefa dia mandringana sy mamotika ny fiainam-piaraha-monina: ny Tsaho no bala ary ny Tondro-molotra no basy. Ny fikambanan’ireo no anisan’ny miteraka toe-javatra mampalahelo sy disadisa eny amin’ny fiaraha-monina eny. Mahery vaika satria firy ny olona voaroba, voa-daroka, voan’ny tsy rariny noho ny Tsaho sy ny Tondro-molotra ? Betsaka ny tantara mampalahelo hitatsika sy henotsika isan’andro raha tsy hilaza afa-tsy ny fitsaram-bahoaka.
Iza no tompon’andraikitra ohatra tamin’ny nahafatesan’ilay lehilahy voatondro molotra tetsy Soanierana tamin’ny niantombohan’ny krizy 2009 ka nolazaina fa olon-dratsy satria nanana basy – nodarohana ho faty ary nahantona teo amin’ny “panneau publicitaire” ny fatiny. Kanjo ora vitsy tato aorina voalaza fa tsy olon-dratsy fa polisy handeha hody.
Iza no henjehana tamin’ny nahafatesana tovolahy vao 21 taona tetsy Ambatomitsangana Androhibe, tamin’ny faran’ny taona 2011, izay nolazaina fa mpivarotra rongony kanefa dia olona tsotra avy nivoaka alina? Iza no nahalala sy nilaza fa mpangala-jaza tokoa ilay 4 mirahalahy teny Itaosy ka niafara tamin’ny fanapotehana ny fiarany sy fidarohana? Iza no tompon’andraikitra eo anivon’ny lalàna amin’ny toe-javatra sahala amin’ireny? Ny olona voa sy ny fianakavina moa dia miala maina sahala amin’ny tako-bilany, mampionon-tena tsy mahita izay ho aleha.
Mazava loatra fa ny vaovao na feo mari-pototra tsy sokajiana ho « Tsaho » satria toe-javatra voaporofo marina ny fisiany. Fa ny besinimaro entanin-kafanam-po ve hanana faharetana sy fahendrena ny handinika sy hanadihady vao hanao fihetsika mety hanenenana aty aoriana? Ny mahakivy dia ny sehatra rehetra misy eto amintsika dia voakasika sy mampiasa an’ireto fitaovana mahery vaika ireto: ara-politika entina hiarovan-tena sy hanimbana ny mpifanandrina amin’ny fanapariahana lainga; ara-tsosialy: entina hanasoketana ny hafa, ets.
Tsy sanatria hanakiana befahatany ny firaisankina misy eo amin’ny olona fa kosa mila mailo ny tsirairay satria ny tokony ho herintsika ihany no fahalementsika. Mihevitra isika fa rehefa mitovy ny eritreritry ny besinimaro amin’ny fotoana iray dia na tsy misy loharanom-baovao azo antoka aza manamarina an’izany dia heverintsika fa izay no marina.
Manahirana sy sarotra ho an’ny tsirairary ve ny:
▪ Mitaky ny loharanom-baovao
▪ Mandinika sy manadihady ary mamakafaka
▪ Manana fanetretena ka tsy ny fo taitaitra no hibaiko fa ny saina
▪ Tsy manaparitaka “feo” tsy azo antoka sy tsy mari-pototra
Mora tenenina fa sarotra tanterahana ve?
Tsy sanatria fitiavana te hitanisa fotsiny tsotra izao akory no atao fa mba hialana amin’ny tsy rariny, na fahafatesan’olona tsy mana-tsiny. Mananjo ny iaina, nanana vady aman-janaka, ray aman-dreny, tapaka sy namana izay niandry azy tany an-trano ireny olona ireny kanefa dia izay no niafarany.
Dia ny tsy fisainana na tsy fitandremana sahala amin’izany ve no hamotehana fiainam-pianakaviana sy ny fiaraha-monina misy antsika. Sa ve hoe tsy havan’ny tena ireny ka mihevitra isika fa tsy voakasika? Sa matahotra ny vavan’ny olona ve isika hoe: “Mba miana-kendry?” Sa ve mihorohoro ihany koa ny tena sao ho voan’ny tondro-molotra tampoka hoe: « Fa ianao koa angaha namany sa ahoana? » Mamy ny miaina re olona! Dia izay ary ve izany ny fiaraha-monina Malagasy hiainantsika sy hitombon’ny taranaka rahatrizay?
Raha izay no tsy maintsy ho izy dia “Aza mahavoa ny goavy manta!”
Cette entrée a été publiée le dimanche 29 janvier 2012 à 11:39 et taguée ampitampitao, armes de destruction massive à Madagascar, aza mahavoa ny goavy manta, Blog Gasy, fandriham-pahalemana, feo mandeha, fiaraha-monina malagasy, Fihavanana, firaisankina, Gasy, gasy miserasera, gasy tia resaka, haino aman-jery, honohono, lainga, Madagasikara, malagasy miresaka, Malagasy mivoatra, Sosialy, Tondromolotra, Tsaho, vaovao, zava-misy et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Malagasy Dream sa S.M.P.L ?
Le Malgache du 21e siècle est-il pacifique ou soumis? »
One response to “Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy”
Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ? « gasyimpact
21 janvier 2013 at 11:15
[…] efa samy ketraky ny fiainana ve ka dia mila hifanaikitra ny tsirairay. Mifanopa, mifaniratsira, mifanely Tsaho, mifampiantsy ady, mifanimbazimba. Ny eny antsena sy eny andalana ary eny ambony Taxi-be efa tsy […]
Arms Sales, Global #Geopolitics and Security Threats. Several players, beyond the usual suspects, are seeking to ex… twitter.com/i/web/status/1… 2 weeks ago
#Madagascar #Culture «Zébu Boy est un roman sur la survie et le deuil avant tout ». Insurrection 1947: une histoire… twitter.com/i/web/status/1… 2 weeks ago
#Madagascar produit 6.000 tonnes de #cacao par an. 0,4% de la production mondiale, mais possède une sérieuse réputa… twitter.com/i/web/status/1… 2 weeks ago